China Twelve ounse တခါသုံးစက္ကူခွက် ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူများ | Chang Liang
စက္ကူခွက်သည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ခြင်းနှင့် အခြေခံစက္ကူ (စက္ကူဖြူ) ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော စက္ကူပုံးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အသွင်အပြင်သည် ပါးစပ်ခွက်ပုံစံဖြစ်သည်။ ရေခဲမုန့်၊ ယို၊ ထောပတ်စသည်ဖြင့် အေးခဲထားသော အစားအစာများအတွက် ဖယောင်းသုတ်ထားသော စက္ကူခွက်များ၊
အပူပေးအချိုရည်အတွက်သုံးသော စက္ကူခွက်ကို ပလပ်စတစ်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားပြီး အပူချိန် 90 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထက်တွင် ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ရေပင်ပွင့်နိုင်သည်။ စက္ကူခွက်များသည် ဘေးကင်းမှု၊ ကျန်းမာရေး၊ ပေါ့ပါးမှုနှင့် အဆင်ပြေမှုတို့ဖြင့် သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ အများသူငှာနေရာများ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ စက္ကူခွက်ကို တစ်ဖက်သတ် PE ဖလင်ခွက်နှင့် နှစ်ဖက် PE ဖလင်ခွက်ဟူ၍ ပိုင်းခြားထားသည်။
● တစ်ဖက်သတ် PE ဖလင် စက္ကူခွက်- တစ်ဖက်သတ် PE ဖလင် စက္ကူမှ ထုတ်လုပ်သော စက္ကူခွက်ကို တစ်ခုတည်း PE စက္ကူခွက် ဟုခေါ်ပြီး ၎င်း၏အသုံးအနှုန်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်- ရေပါသည့် စက္ကူခွက်၏ ဘေးဘက်တွင် ချောမွတ်သော PE ဖလင်ပြား ပါရှိသည်။
● နှစ်ထပ် PE ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော စက္ကူခွက်- နှစ်ဖက် PE ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော စက္ကူခွက်ကို နှစ်ထပ် PE စက္ကူခွက်ဟု ခေါ်သည်၊ ၎င်းအသုံးအနှုန်းမှာ- စက္ကူခွက်အတွင်းနှင့် အပြင်တွင် PE ပါရှိသည်။ ယခု ကျွန်ုပ်တို့တွင် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး PLA ဖလင် စက္ကူခွက်၊ ပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေးနှင့် ပြိုကွဲပျက်စီးနိုင်သော ပလတ်စတစ်ပြဿနာအတွက် စိတ်မပူပါနှင့်။
● စက္ကူခွက်အရွယ်အစား- ကျွန်ုပ်တို့သည် စက္ကူခွက်အရွယ်အစားကို အောင်စ (OZ) ဖြင့် တိုင်းတာသည်။ ဥပမာအားဖြင့်9အောင်စနှင့် 12 အောင်စများသည် ဈေးကွက်တွင် အသုံးများသည်။
1. အလင်းအရည်အသွေး၊ ကွဲအက်မှုဆန့်ကျင်။ ဖန်ခွက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စက္ကူခွက်များသည် ပေါ့ပါးပြီး ကွဲထွက်နိုင်သည့် အန္တရာယ်မရှိပါ။
2. အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်; အလင်းအရည်အသွေးသည် လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေနိုင်သည်။
4. ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ပေါင်းစပ်နိုင်ပြီး အကာအကွယ်လုပ်ဆောင်ချက်ကို တိုးတက်စေပါသည်။ ၎င်းသည် အလူမီနီယမ်သတ္တုပြား၊ ပလပ်စတစ်နှင့် အခြားပစ္စည်းများ ရောစပ်ထားသောကြောင့် ဖောက်ပြန်ခြင်း၏ အကြောင်းအရာများ ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကို ဟန့်တားနိုင်သည်။
5. ကောင်းမွန်သော အရိပ်အာဝါသ စွမ်းဆောင်ရည်၊ အရောင်၊ အနံ့၊ အရသာတို့ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။
7. အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး မြန်နှုန်းမြင့် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ထုပ်ပိုးမှုအောင်မြင်ရန် ထုပ်ပိုးသည့် စက်များနှင့် အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
7.ဖွင့်ရန်လွယ်ကူပြီး တံဆိပ်ခတ်ရန်၊ ဖွင့်ရန်လွယ်ကူသည်။
8. စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ကိုင်တွယ်ရလွယ်ကူပြီး ပြန်လည်အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး အရင်းအမြစ်များကို ချွေတာနိုင်သည်။
9. နည်းပညာအသစ်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်အသစ်များ ပေါ်ထွန်းလာခြင်းကြောင့် PLA စက္ကူခွက်သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အကာအကွယ်ပေးပြီး ပျက်စီးစေသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက်: အရည်အသွေးကောင်း၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်း။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ Win-Win Road ကိုဖွင့်ပါ။
ယခင်- တစ်ခါသုံးရောင်စုံ Paper Lunch Boxes
နောက်တစ်ခု: စိတ်ကြိုက် တစ်ခါသုံး စက္ကူပြားများ